China Glass Deco Wine Bottle Vase orinasa sy mpamatsy | Tsara ery
Safidy opsional na namboarina
1. Mifaninana amin'ny fandrakofana divay vita amin'ny rojo / kofehy vita amin'ny kofehy, toy ny boaty / voankazo / snacks / voninkazo ho toy ny haingon-trano.
2. Famolavolana tsy manam-paharoa miaraka amin'ny fanetezana tavoahangy divay amin'ny fotoana rehetra, toy ny fety, haingon-trano, fanomezana, zaridaina.
3. Ny fonosana divay dia vita amin'ny vy matevina, fanoherana, asidra ary miaro alkali, asio porofo.
4. Ny tavoahangy divay vita amin'ny divay vy ho toy ny fitaovana miditra amin'ny kalitao sy ny fanaovana sealing.
5. tavoahangy miloko isan-karazany ho an'ny safidy.
6. Tsentsina amin'ny tampon-tànana manja, azo antoka sy hentitra ny tanana.
7. Fitaovana azo antoka sy azo antoka.
Previous: Tavoahangy divay vita amin'ny divay OEM - boaty fantsom-bary Borosilicate misy alumina screw Cap (D30) - Sogood
Manaraka: Mason Jar Vase
Takelaka vita amin'ny alàlan'ny sary miloko maro loko
Voaroy miloko volomboasary miloko loko
Tariby vita amin'ny gorodona manjelatra matevina
Vovonana fantsom-bolo vita amin'ny vongan-kitapom-bolo